HomSuvedi — Fri, 01/08/2021 - 14:46
अफिबाट साँझ साँझ पर्न लाग्दा लक्ष्मणजी घर आइपुगे । घरमा आउनासाथ हातमुख धोएर उनलाई चिया नास्ता खाने बानी छ । आज पनि त्यही उपक्रम सुरु भयो । सुनिताले चिया खाजा दिइन् । चारजनाको जहानमा अहिले दुई जना मात्र छन् । छोरा छोरी पढ्न विदेश गएपछि घर सुनसान भएको छ ।
बेडरुममा बसेर लक्ष्मणजी खबर हेर्दै अनि चिया खाँदै थिए । यसै बेला सुनिताको मोबायलमा सन्देश आएको संकेत उनले पाए जो उनैका छेउमा थियो । नजिकै भएकोले उनले सुनिताको मोबाइल उठाएर सन्देश पढे । पढ्दापढ्दै उनका आँखा तिलमिलाए । एकपटक पढेर उनको चित्त बुझेन दोहो¥याएर पढे ।
आमा र बाको झगडा
editor — Thu, 01/07/2021 - 07:06
एकदिन बिहान अकस्मात आमा र बा को झगडा पर्यो।
आमा – किन तपाई आजभोलि हामीसँग नाराज हुनु भएको छ? किन भनेको मान्नु हुन्न? यी भएका गहना बेचेर भोलि के गर्ने? म त गहना बेच्न दिन्न।
बा – मलाई धेरै नसिकाऊ। मसँग धेरै कचकच नगर । यी गहना मेरा पनि हुन। मेरो पनि हक छ। बेच्न नदिने भए कि मैले भनेको मान कि अर्को बाटो समातेर जाऊँ।
अतृप्त यौन इच्छा
editor — Sun, 01/03/2021 - 12:47
नहुष भन्ने राजाका छ भाइ छोराहरू थिए । जेठा यति थिए भने ययाती माहिला थिए यसरी नै संयाती, आयति, वियति र कृति ययातिका भाइहरू थिए । राजा नहुषले राज्य सञ्चालनको भार यतिलाई दिन चाहन्थे । यतिले राज्य सञ्चालन गर्ने काम लिन मानेन् । यतिलाई राज्य सञ्चालनमा हुने विविध खाले कुकर्महरू, भोगविलासका कर्महरूलाई उनले घृणा गर्दथे । उनले आफ्नै बाबु नहुषले शक्तिको आडमा इन्द्रकी पत्नी शचीसँग सहवास गर्ने कुप्रयास गरे ।
editor — Wed, 12/30/2020 - 21:05
आकाश गर्जन्छ, पानी बर्संदैन । हिमाल फुलेको महसुस हुन्छ, खेतमा फुङ्ग धूलो उडेको भेटिन्छ । लामो समयसम्म जनताको तिरो खाएर जिम्माको कामको टुङ्गो नलगाई घर फिरेका आधा दर्जन मान्छे गाउँ चहार्न हिँडेको देखिन्छ । तीमध्ये आधा जतिले भोलिबाटै काँधमा हलोजुवा बोकी खेततिर लाग्नुपर्छ । दिनमा असिनपसिन भएर काममा जोतिनु र साँझपख घर फर्कनु अनि खाना खाएर आकाशका तारा गन्नु नै उनीहरूको दिनचर्या हुन्छ । नजिकै नहर दौडिरहेछ । त्यो नहर हेर्नका लागि मात्र यो बाटो भएर बग्छ । हाम्रो खेतमा सिँचाइ हुँदैन । कारण, नहर खेतभन्दा दश/पन्ध्र फिट गहिरो छ ।
editor — Sat, 12/26/2020 - 20:12
‘आर्टिस मोड, रोल, एक्सन’ निर्देशकले नायकलाई आदेश दिए । नायकले भने अनुसार दुई प्रतिशत पनि अभिनय गर्न सकेन ।
निर्देशक अवाक भयो । नायक बम्कियो ‘म निर्माता हुँ, मैले लगानी गरेको छु, जसरी हुन्छ त्यसरी मलाई रोल खेलाऊ, अरू कुरा म जान्दिनँ ।
editor — Wed, 12/09/2020 - 19:19
गाउँ छेवैको प्रहरी थाना सुनसान खडा छ । दुई युवती जम्ला हात गरिरहेका छन् । अगाडिको कुर्सीमा बस्न सकस मानिरहेकी हबल्दार दिदी अक्कनबक्क छिन् । वातावरणमा निर्जनता छाइरहेको छ ।
“चेलीहरू हो ! गर्नसम्म गरेछौँ । कानूनको मुखमै कालोमोसो दलेछौ । तिमीहरूलाई इज्जत नदिऊँ भने आफ्नो भूल स्वीकारेर कानूनको शरणमा आएका छौ । अर्कातिर आफ्नै विभागको धज्जी उडाउने काम गरेका छौ ।” हवल्दार आँखा मिच्दै थप्छिन्, “अरू हाकिमहरू अन्तै जानुभएको छ । यो थाना उहाँकै नेतृत्वमा थियो । उहाँ पछिको वरिष्ठ वरियाताक्रममा म नै पर्छु । अब म कसो गरूँ ?”
editor — Sat, 11/28/2020 - 20:19
सुरजीतले खुसी हुँदै चिच्याए –“बा ए बा ...!” घरको ढोका खोलेपछि बोल्दाबोल्दै सुरजीतको बोली रोकियो ।
काठको खटियामा सुतेका कनैयाले सुरजीततिर हेर्दै भने –“तँ खुसी हुनको कारण मलाई थाहा छ । तँ यस परीक्षामा पनि पहिला नै भइस् होइन ?”
सुरजीतले बाबुको निधार छाम्दै भने–“ला, तपाईंलाई त ज्वरो पो आएछ । ओठमुख पनि सुकेछ पानी खाने हो ?”
रहस्यमय जीव (विज्ञान कथा)
Pravat Subedi — Mon, 10/19/2020 - 08:07
ब्रह्माण्ड धेरै ठुलो छ । ब्रह्माण्डभित्र धेरै रहस्यमय कुराहरू लुकेका छन् । ब्रह्माण्ड आफैं एक रहस्य हो ।.यसको अन्त छैन । यो अनन्त छ । ब्रह्माण्डभित्र अनन्त आकाशगंगा अनन्त ग्रहहरू र असीमित ताराहरू छन् तर हामी केवल एउटा ग्रहको बारेमा जान्छौं, जसमा जीवन छ । हो यो पृथ्वी हो । तर अन्य ग्रहहरू पनि छन् जुनमा जीवन हुनसक्छ ।
यो ३०औँं शताब्दी हो । यहाँको प्रविधि एकदम उन्नत छ । यस युगमा व्यक्तिले हातले काम गर्नुपर्दैन । सबै कामहरू तिनीहरूका सहायक रोबोटहरूद्वारा गरिन्छ ।
रारा र चन्दन
editor — Sun, 10/11/2020 - 12:36
२०४६ सालको बहुदल घोषणापछि राजनीतिक पार्टीहरूको राजकाज सुरु भयो । प्रायः राजनीतिज्ञहरू आफ्नो सङ्घर्षको बदलामा राजसी सुखभोगमा लिप्त भए । सायद भागबन्डा नमिलेको हुनसक्छ, तर केही राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो लक्ष्य देश बनाउनु र जनताको जीवन स्तर उकास्नु हो भनेर बाउँटिए । तिनले दुर्गममा पसेर माओवादको नाममा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरे । यो आन्दोलन सरकार र माओवादीबीच पूरै दश वर्ष चल्यो । यस आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी सर्वसाधारण पेलानमा परे । धेरैको ज्यान गयो ।
टंगला ली से लसिनम
बैशालु जवानिले शहर किनिदिन्छु
नारी विद्रोहका कविताहरू
जति हेरे नि हेरौ हेरौ लाग्ने मोरी कस्ती काली
गजल (आफ्नै खुशी अंगालोमा)
समय र मान्छे
न डुब्न सकें न तर्न सकें
अनौठो जीवन कथा
मनबाटै माया पलाउँदा सम्झनु
मोती नमाग, सुन नमाग मसंग,
तिमी नै हौ मेरो संसार
गजल "मेरो गाउँ"
म, एक दासी